Warar - Qaab-dhismeedka daaweyn biyood ku noqosho osmosis
Waxaan cabeynaa biyaha tuubada waxaa kujira macdano fara badan iyo bakteeriya, viruska heerkulka sare kujira ayaa cabi kara biyo saafi ah hada waa qalab lagu sifeeyo "soosaarka" banaanka, kadib qalabkee?
Abuur qalab nadiif ah oo ah nidaamka nidaamka osmosis
Nidaamka osmosis-ka ee soo noqnoqda waxaa badanaa lagu miiraa filinka filinka badan leh wuxuu kala sifeyn doonaa wasakhda, ha ahaado mid wanaagsan ama mid xun, dhammaantood waa la mamnuucay, biyo kaliya ayaa laga tagayaa, qalabkani aad ayuu u fiican yahay, qalabka kala sifeynta iyo bambooyin, xuubka ka kooban, aaladahaani waa ka koobnaan karaan shaandhada nijaasta, sidee u nadiifin karaa biyaha tuubada ma shaqeeyaan? Midka hore waa iyada oo loo marayo mashiinka cadaadiska sare leh, qalabka osmosis-ka gadaal si loo siiyo dhiirigelin xoog leh soo bandhigida biyaha iyo lakabyada kala-soocida xuubka xuubka dambe ee osmosis, qaar ka mid ah wasakhda iyo wasakhda sifeynta, hase yeeshe, waxay caddeeyeen astaan ​​muhiim ah biyaha saafiga ahi waa tabinta, kor u qaadista wasakhda biyaha hooseeya. Marka sidee loo hagaajiyaa nadiif ahaanta biyaha saafiga ah? Wuxuu leeyahay qaab-dhismeedkee?
Nadiif sare qalabka osmosis-ka iyo dib-u-dhiska
Bamka biyaha ceeriin
Tayada biyaha aaladaha nuugista asalka ah waxayna siinayaan awood
Taangiga biyaha asalka ah
Neefsashada haanta biyaha ceeriin ee asalka ah ee ka soo baxda marinka asalka ah ee taangiga si loo sameeyo, si looga hortago in sahaydu aysan daaran
Ka saarista sheyga si looga saaro wasakhda ku jirta biyaha si looga saaro bakteeriyada.
Miirayaasha kaarboonka firfircoon
Biyaha la sifeeyey, ama warankiilo koloriin ah
Meel yar oo ku dhex jirta weelka, si kastaba ha noqotee, qalabka daaweynta biyaha weelka laakiin si fiican loo sameeyay, weelkan waxaa loo dhigayaa inuu wax ka qabto ceelasha asalka ah ama biyaha agtooda, waad badbaadin kartaa booska oo waxaad ku guuleysan kartaa qalabka aan lala socon karin muddo dheer oo aan cimilada la soo saarin , Qalabka daaweynta biyaha oo si buuxda loo ilaaliyo, kaas oo weelka si fudud u maareyn kara, laakiin waliba qurux badan, waxaad ku sawiri kartaa habab kala duwan weelka, marka lagu daro sidoo kale fududeynta aaska dhulka, amniga iyo xasilloonida labadaba.